Awuyi kucinga ngento enokwenzeka ukuvula iNokia 9 Pureview | I-Androidsis
Awuyi kucinga ngento enokwenzeka ukuvula iNokia 9 Pureview
Esinye sezikhalazo eziphambili ze Nokia 9 PureView sisikena sakho seminwe esingathembekanga. Kwiveki ephelileyo, i-HMD Global ekugqibeleni isungule phucula, ekuthiwa ukulungisa ingxaki ngesikena.
Ngelixa ezinye izinto ziphuculwe nge-firmware entsha ekhutshelwe iflegi, uhlaziyo lubonakala luchaphazele umsebenzisi omnye. Ifowuni ivulwe ngokungacacanga kwiscreen usebenzisa nantoni na. Ngaba uya kuba nakho ukukholelwa ukuba siza kukuxelela ngokulandelayo?
Umnini ochaphazelekayo ohamba kuyo unjalo @decodedpixel. Wabelana ngevidiyo kwi-Twitter ebonisa ingxaki nge-Nokia 9's in-display fingerprint scanner. Ifowuni yayivuliwe ngomnwe ongabhaliswanga kunye nepakethe yentsini! Ngapha koko, wongeza ukuba wayekwazile ukuyivula ngengqekembe kunye neiglavu zesikhumba. Iyamangalisa…
Nantsi inqaku lam lenzwa yeminwe yeNokia 9, ifowuni inokuvulwa kusetyenziswa ipakethi yeentshungama okanye ngomnwe womnye umntu. Nokuba ivulwe ngengqekembe okanye iiglavu zesikhumba. Nceda undincede ndilungise iNokia 9 yam. pic.twitter.com/Thce3nB2fr
-Ipixeded Pixel (@decodedpixel) Aprili 21, 2019
Ingxaki ayizange ihambe nasemva kokubhalisa kwakhona iminwe entsha. Nangona kunjalo, Akukho ngxelo ivela kwi-HMD Global ngalo mbandela okwangoku.
Inye kuphela into esiyiqaphelayo kukuba kukho isikhuselo seglasi esikwi sixhobo. Ngelixa abakhuseli bekhusi bengenelela ekusebenzeni kwezikena zeminwe ezikwi-screen, isixhobo akufuneki sivezwe ngokulula njengoko kuxeliwe ngumsebenzisi.
I-HMD Global inokufuna ukukhupha olunye uhlaziyo ukulungisa ingxaki, ukuba igcwele. Kwelinye icala, ukuba kugcinwa ngexesha, umsebenzisi kuya kufuneka ayilungise.
INokia 9 PureView isungulwe ngokusesikweni eSpain
Khumbula oko INokia 9 Pureview sisiphelo esiphakamileyo esinikwa amandla yiQualcomm's Snapdragon 845, I-10nm SoC ethi kule meko idityaniswe ne-6GB ye-RAM kunye ne-128GB yendawo yokugcina yangaphakathi, kwaye ixhotyiswe ngebhetri yomthamo we-3,320mAh. Isixhobo, naso, sinescreen se-5.99-intshi ye-FullHD + pOLED, ikhamera ye-penta yangasemva enee-12 MP sensors kunye ne-20 MP selfie camera.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Awuyi kucinga ngento enokwenzeka ukuvula iNokia 9 Pureview
[VIDEO] Amaqhinga ali-15 (+3) awona maqhinga mahle kwi-Samsung Galaxy S10 +
I-OnePlus 7 Pro iya kuboniswa ngoMeyi 14 eNew York